Sant Feliu de Guixols: ထူးခြားသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရှိအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များ ခရီးသွားသတင်း
Sant Feliu က de Guixols
လူးဝစ် Martinez | | Espana, ကမ်းခြေ
Sant Feliu de Guixols ဘုန်းကြီးကျောင်း
Sant Feliu de Guixols သည်လှပသောနေရာ၏အလယ်တွင်တည်ရှိသည် ကော့စတာ brava၎င်း၏ကမ်းပါး, ကမ်းခြေနှင့် coves နှင့်အတူ။ ထိုအချိန်က၎င်းသည်ဖော့ဆို့လုပ်ငန်းကိုရည်စူးထားသောအရေးကြီးသည့်ဓနရှင်လူနေအိမ်ရာနေရာဖြစ်ခဲ့ပြီးယင်းကိုမြောက်မြားစွာတွေ့မြင်နိုင်သည် သာယာသောအိမ်များ ၎င်း၏မြို့ပြနျူကလိယတက်ပါစေ။ အလားတူပင် Gerona ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးကဲ့သို့အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ရှိသည် Romanesque အမွေအနှစ်.
Sant Feliu de Guixols ကမ်းလှမ်းချက်သည်အရသာပြည့်ဝမှု၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများနှင့်ခရီးသွား anim ည့်သည်တို့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုပြည့်စုံစေသည်။ မင်းသူမကိုသိချင်ရင်မင်းအကြောင်းသူနည်းနည်းပြောပြမယ်။
1 Sant Feliu de Guixols တွင်မည်သည့်အရာကိုကြည့်ရှုရမည်
1.1 Sant Feliu de Guixols ၏ဘင်နီဒစ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
1.2 Patxot အိမ်
1.3 Casino La Constancia, Sant Feliu de Guixols ရှိခေတ်မီ၏အထိမ်းအမှတ်
1.5 အဆိုပါ Sant Feliu က de Guixols Town Hall
1.7 Carmen Thysen အာကာသ
2 Sant Feliu de Guixols မှာဘာစားရမလဲ
3 ဘယ်အချိန်မှာ Sant Feliu de Guixols ကိုသွားရတာကောင်းသလဲ
4 Catalan မြို့ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
Sant Feliu de Guixols တွင်မည်သည့်အရာကိုကြည့်ရှုရမည်
မြေထဲပင်လယ်ဒေသကရေချိုးနေတဲ့ကမ်းခြေတွေကိုကြည့်ရတာပျော်စရာအပြင်မြို့မှာသင်အများကြီးတွေ့နိုင်တယ် အောက်ပိုင်းAmpurdán အထိမ်းအမှတနှင့်သဘာဝလမ်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်။ နှစ် ဦး စလုံး။
Sant Feliu de Guixols ၏ဘင်နီဒစ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
မြို့၏heritageရာမအမွေအနှစ်၏နဖူးစည်းစာတမ်းသည်အထင်ကြီးလောက်သောဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်သည် Romanesque ၁၀ ရာစုတွင်ဘင်နီဒစ်အမိန့်ဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သော်လည်းထိုအဆောက်အအုံတွင်မတူညီသောစတိုင်များရှိသည်။ ဒါ့အပြင် Romanesque ဖြစ်ကြသည် မျှော်စင် Fum, semicircular စက်ရုံနှင့် ပြောင်းဖူး၏, စတုဂံ, ဒါပေမယ့်ဘုရားကျောင်း Gothic, ဒါခေါ် Ferrada တံခါး ဒါဟာ Pre-Romanesque နှင့်ဖြစ်ပါတယ် Sant Benet ၏မဟာ ဒါဟာအခြားအဆောက်အ ဦး များကဲ့သို့ baroque ဖြစ်ပါတယ်။
ငါတို့ပြောခဲ့တဲ့ manor အိမ်တွေရဲ့အကောင်းဆုံးဥပမာကတော့အံ့ the စရာကောင်းတဲ့ Patxot house ပဲ Noucentisme ကြောင့်ဗိသုကာမှ Catalan အဲလ်ဘတ် Juan ဈ Torner။ ၎င်းကို ၁၉၁၇ ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၎င်း၏မျက်နှာစာကိုကြွေပြားများ၊ ကြွေထည်များနှင့်ဖန်ထည်များတွင်အလှဆင်ပစ္စည်းများဖြင့်အလှဆင်ထားသည်။
ကာစီနို, La Constancia
Casino La Constancia, Sant Feliu de Guixols ရှိခေတ်မီ၏အထိမ်းအမှတ်
ဤအဆောက်အ ဦး သည်ယခင်အဆောက်အအုံ၏ရှေ့မှောက်၌ရှိပြီးလှပမှုအတွက်နောက်ကျကျန်ခဲ့သည်။ ခေတ်မီမှုကိုအကြီးနှင့်တုံ့ပြန်ပါ Mozarabic လွှမ်းမိုးမှု ၎င်းပြတင်းပေါက်များမုတ်များ၌တွေ့မြင်နိုင်သည်။ သင်မြင်သောအခါသင်၏မျက်စိကိုဖမ်းရန်သေချာသည်။
အထက်ဖော်ပြပါအချက်နှစ်ချက်အပြင် Sant Feliu de Guixols တွင်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အိမ်များရှိသည်။ သူတို့တွင် Gaziel အိမ်, ခေါင်းလောင်းနှင့်အတူတ, အ Pecher အိမ်, အ Ribot သို့မဟုတ် Maynegre အိမ်.
အဆိုပါ Sant Feliu က de Guixols Town Hall
၁၅၄၇ ခုနှစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့သောကြောင့်ယခင်ဆောက်လုပ်ခဲ့သောအဆောက်အအုံများထက်ဟောင်းသောအခြားလှပသောဆောက်လုပ်ရေးတစ်ခုရှိပါသည်။ ဤရက်စွဲဖြင့်သင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ အလွန်နောက်ကျ Gothic နှင့် XNUMX ရာစုအတွင်းမျှော်စင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
Sant Feliu de Guixols နှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုမှာ၎င်းသည်ကြီးမားသည် ကျောက်တုံးကြီး Santa Cristina de Haro ၏စည်ပင်သာယာသက်တမ်းနှင့်နီးပြီးဖြစ်သောတောင်ပို့တစ်ခုတွင်မဖြစ်နိုင်သည့်မျှတမှုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးယင်းသည်ဥရောပတွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
Carmen Thysen အာကာသ
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် Baroness Thysen သည်ပန်းချီနှင့်ဆိုင်သောဤယာယီပြပွဲစင်တာကိုတပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဇွန်လမှအောက်တိုဘာလအထိအုပ်စုလိုက်ရောတစ် ဦး ချင်းပြပွဲများကိုပါဖွင့်လှစ်ထားသည်။
သငျသညျ၎င်း၏အံ့သြဖွယ်ကမ်းခြေခံစားခြင်းမရှိဘဲ Girona မြို့မသွားနိုင်ပါ။ များစွာသောအားဖြင့်သင်သည်ရေအားကစားကဲ့သို့သောရေငုပ်ခြင်း၊ ရေငုပ်ခြင်း၊ သူတို့တွင်သင်၌ရှိသည် Sant Feliu ကမ်းခြေ, Sant Pol ၏, la dels Canyerets နှင့် Jonca, Molí, Port Salvi သို့မဟုတ် dels Mussols coves များ။
ကက်တလန်ကျွန်းသည်ပင်လယ်ကိုမျက်နှာမူထားသော်လည်းအလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသဘာဝရှုခင်းများနှင့်ဝန်းရံထားသည် က Les Gavarres သို့မဟုတ် အဆိုပါ Ardenya။ ဤရွေ့ကားမှတဆင့်စည်းလုံးသောတောင်တက်ခြင်းနှင့်စက်ဘီးလမ်းကြောင်းရှိပါတယ် အမြင် ကနေသင်ကော့စတာ Brava ၏အံ့သြဖွယ်အမြင်များရှိသည်။ ဒီသဘောသဘာဝအရအရေးအကြီးဆုံးကတော့ Cala Urgell, Les Bateries, Sant Benet, Piug Gros နှင့် La တို့ကဲ့သို့သောရှုထောင့်များကိုဆက်သွယ်ပေးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ Sant Elm ၏ရသေ့မင်းမှာလှပတဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရှိတယ်။
Sant Feliu de Guixols မှာဘာစားရမလဲ
Catalan မြို့၏ gastronomy သည်လတ်ဆတ်သောငါးများကိုဥယျာဉ်မှထုတ်ကုန်များနှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ ဒီရလဒ်ကထိုကဲ့သို့သောဟင်းလျာများဖြစ်ကြသည် suquet de peixအာလူးနှင့်ကျောက်ငါးများပါ ၀ င်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများအတွက်ပြင်ဆင်ပေမယ့်ဒါခေါ်မီးမောင်းထိုးပြသောကော့ ကွမ်းခြံကုန်းအပေါငျးတို့သအထက်, ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့် unsalted နှင့် ပင်လယ်နှင့်တောင်၎င်းသည်အသားများကိုငါး၊ ပင်လယ်စာနှင့်ပေါင်းပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဆန်၊ Empordàအစားအစာ၏အခြားဆန်များပါဝင်သည်။
သင်ကြိုးစားရမည့်အခြားပုံမှန်ဟင်းလျာများမှာမူအားကောင်းသောဟင်းချိုဖြစ်သည် escudella နှင့် carn d'ollaအဆိုပါ ပဲနှင့်အတူငါးရှဥ့် conger, အ ပဲနှင့်အတူအနက်ရောင် puddingအဆိုပါ ကင်းမြီးကောက် သို့မဟုတ် သစ်တော်သီးနှင့်အတူဘဲ.
အချိုပွဲများအနေနှင့် Sant Feliu de Guixols ၏အစာအိမ်သည်သူတို့၌လည်းကောင်းသည်။ အလွန်ပုံမှန်ဖြစ်ကြသည် fritters, လမ်းပေါ်မှာတောင်ရောင်းချရသော။ ဒါပေမယ့်လည်း ဆေးလိပ်, မုန့်သို့မဟုတ်မုန့်နှင့်ပြည့်စုံတစ်ချည်, နှင့် flaonaယခင်ယခင်နှင့်ဆင်တူသော်လည်းအိမ်တွင်းအိမ်တွင်းဒိန်ခဲနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အချိုရည်နှင့်ပတ်သက်။ , သင်နှင့်အတူဝိုင်ရှိသည် Ampurdán၏ဇာစ်မြစ်၏ဖျော Perelada မှအဖြူသို့မဟုတ် Capmany မှအနီလိုလို။ နှင့်အစာစားခြင်းပြီးအောင်ကြိုးစားပါ အဘယ်အရာကိုမီးရှို့ခဲ့သည်ကော်ဖီသည်flambéedရမ်ပါသောကော်ဖီဖြစ်သည်။
ဘယ်အချိန်မှာ Sant Feliu de Guixols ကိုသွားရတာကောင်းသလဲ
Girona မြို့ဟာပုံမှန်ရာသီဥတုရှိတယ် မြေထဲပင်လယ်။ ဆောင်းရာသီတွင်အေးသည်။ အပူချိန်သည်သုညဒီဂရီအောက်တွင်ခဲသည်။ နွေရာသီသည် ၃၀ ထက်မပိုသောကြောင့်နွေးထွေး။ ပျော်စရာကောင်းသည်။
မိုးရွာသွန်းမှုများအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်များများစားစား မရှိ၍ အဓိကအားဖြင့်ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Sant Feliu de Guixols သို့သွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်များမှာ နွေ ဦး နှင့်နွေရာသီ.
Sant Feliu de Guixols နှင့်အနီးဆုံးလေဆိပ်ဖြစ်သည် Girona-Costa Bravaကီလိုမီတာသုံးဆယ်အကွာအဝေးပါ။ အနီးဆုံး AVE ဘူတာနဲ့လည်းအလားတူပါပဲ။ ၎င်းသည်ပြည်နယ်၏မြို့တော်ဖြစ်ပြီးထို မှနေ၍ သင်ရထားသို့သွားနိုင်သည် Caldas de MalavellaSant Feliu မှကီလိုမီတာ ၂၀ ဝေးသော
မြို့တော်ကို Gerona နှင့် Tossa de Mar၊ Palamósနှင့်ပင်မြို့များနှင့်ဆက်သွယ်သောဘတ်စ်ကားလိုင်းများစွာရှိသည်။ ကနေဒါ။ နောက်ဆုံးသင်၏ကိုယ်ပိုင်ကားဖြင့်သွားလျှင်၎င်းကိုပြုလုပ်ရမည် ကို C-31 အဝေးပြေးလမ်းမကြီး ပြီးတော့ယူပါ လမ်း C-65.
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် Sant Feliu de Guixols မြို့ငယ်လေးသည်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေရန်သင်လိုအပ်သမျှကိုလှပသောရှုခင်းများ၊ လှပသောကမ်းခြေများနှင့် coves များ၊ ပိုမိုကြီးမားသောမြို့ကြီးများနှင့်အလွန်ထူးခြားသည့်gasရာမအဆောက်အအုံများကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအမွေအနှစ်တစ်ခုပေးသည်။ သင်ဒီကိုလာဝံ့သလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » Espana » Sant Feliu က de Guixols
Toledo ၏ Alcazar